काठमाडौ ठमेलका अनिश जसको अमेरिकामा आफ्नै ७ वटा जहाज छन्, कसरी गरे उनले कल्पनै गर्न नसकिने यस्तो चमत्कार ? प्रत्यक्ष हेर्नुहोस् (भिडियो) – Kavrepati
Home / समाचार / काठमाडौ ठमेलका अनिश जसको अमेरिकामा आफ्नै ७ वटा जहाज छन्, कसरी गरे उनले कल्पनै गर्न नसकिने यस्तो चमत्कार ? प्रत्यक्ष हेर्नुहोस् (भिडियो)
admin June 20, 2021	समाचार Leaveacomment 115 Views
हामी वैदेशिक रोजगारी भन्ने वित्तिकै सामान्य साना तिना अरुको कम्पनी वा ब्यवसायमा काम गर्ने भन्ने सम्झन्छौं । तर विदेशमा कल्पनै गर्न नसकिने प्रगती गरेका थुप्रै नेपालीहरु छन् । जसमध्य अनिश प्रधान पनि एक हुन् । जसको आफ्नै ७ वटा जहाज छन्, गाडी र थुप्रै ब्यवसाय । उनले जहाज आफै बनाउँछन् । पुराना गाडी र जहाज लिएर त्यसलाई नयाँ र नयाँ मोडलमा ढालिदिन्छन् ।
उनले पनि निकै तितो अनुभव गरेका छन् । उनले नेपालमा आफ्नो बारेमा सुनाउँदा सुरुमा नेपालीले विश्वास नगर्ने बताउँछन् । उनको घर ठमेल भगवान वहाहल, अनिश प्रसाद प्रधान हो । एयर क्राफ्ट मेकानिकल काम गर्ने उनले अमेरिकामा भएका आफ्ना जहाज देखाए । जसमा केही नयाँ र केही पुराना छन् । उनले अमेरिकामा १० वर्ष अघि कम्पनी स्थापना गरेका थिए । उनले करिब डेढ वर्ष देखि जहाज सम्बन्धी सबै काम गर्छन् ।
अहिले उनले प्लेन बनाउने, स्ट्रक्चर निर्माण र पुरानो निर्माण पनि गर्ने काम गरेका छन् । जर्नर एभियसन एयरक्राफ्ट देखि सबै प्रकारका प्लेन बनाउँछन् । उनले बनाउने र उडाउने जहाजमा ४ जना बस्न मिल्छ । ब्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने जहाज उनले बनाउने गरेका छन् । त्यस्तै उनले जहाज उडाउने तालिम समेत दिन्छन् । उनकै कम्पनीमा आएर जहाज उडाउने तालिम लिने, जहाज किन्ने र लैजाने गर्न सक्छन् । उनले त्यसको लाइसेन्स पनि दिने गर्छन । अमेरिकामा उनले बनाएको जहाज किन्न ४ लाख ५० हजार डलर देखि माथी पर्छ ।
उनी अब नेपालमा आएर केही गर्न चाहन्छन् । तर नेपालमा पैसा कमाउनका लागि होइन यहाँ प्रयोग गर्न सकिने बस्तु प्रयोग गर्ने र यहाँको सौन्दर्यमा रमाउन नेपाल आउन चाहेको बताए ।
Previous मेलम्चीमा देखिएका यी ब्याक्ति जसलाई भगवान भन्दै रुन थालेपछि…. आखिर को हुन् यी ब्याक्ति ? (भिडियो)
Next आंचल शर्मा भन्छिन्, ‘रियल हिरो पल शाह नै हो, उँहालाइ महानायक राजेश हमालसंग तुलना गर्न मिल्दैन’ (भिडियो)